Centrifuge (Ndị na -emepụta na -ere igwe centrifuge)
Sistemụ Mmepụta Nri
Sụfụ & Deodorizing System
Sistemụ mgbasa ozi
Site na ọsọ ntụgharị efere nke 7069 rpm, hụ na nkewa atọ ka mma na mmanụ azụ ka mma.
Oke ọsọ ọsọ na ngwa na -agbanwe agbanwe iji mezuo ihe dị iche iche chọrọ nke ụdị azụ dị iche iche. Adabara dị iche iche mmanụ ọdịnaya ihe.
Site na njikwa PLC na -akpaghị aka, akpaaka dị elu & ọrụ dị mfe wee chekwaa ike mmadụ.
Igwe anaghị agba nchara nwere mmetụta na -eguzogide corrosion kacha mma.
Ngwawa nke ọma na nke ọma, nweta mmanụ azụ dị elu.
Imewe ihe eji emechi emechi, dobe oghere ọrụ ka ọ dị ọcha.
A na -ejikwa valvụ solenoid atọ na -achịkwa na -akpaghị aka site na njikwa njikwa ọgụgụ isi PLC. Onye ahịa nwere ike tinye onwe ya oge njikwa dị ka akwụkwọ ntuziaka njikwa ọgụgụ isi PLC si chọọ. Mgbe ngwa njikwa dị na ngosipụta ọrụ akpaka, a na -emepe valvụ solenoid ejiri mee akara mmiri site na njikwa otu ugboro kwa nkeji iji gbakwunye mmiri. Mmiri a na -esi na onye na -ekesa mmiri abanye, ruo oghere n'etiti nnukwu efere na piston na -amị amị. Welie piston mmịfe ahụ site na ike centrifugal nke mmiri. Mee elu nke pistin ahụ na -amị amị ka ịpị gasket n'elu nnukwu efere, akara zuru oke, n'oge a bido iri nri. Mgbe ị na-agbada, mmiri na-emeghe na-abanye site na onye nkesa mmiri ruo oghere oghere, na-amanye obere piston slide mechie, mee ka mmiri akara si na nsị mmiri na-asọpụta, mgbe ahụ piston na-amịda ada, adịghị ọcha siri ike na oghere na-ejide sedimenti na-esi na sedimenti apụta. ọdụ ụgbọ mmiri ọpụpụ site na centrifugal force. Mgbe ahụ, mejupụta mmiri akara ahụ, na -amanye akara piston ọzọ. Otu oge, a na -emepe valvụ solenoid nke a na -asa na mmiri, gbanye ihe siri ike na mkpuchi. Emere usoro a site na njikwa njikwa ọgụgụ isi PLC, nri ekwesịghị ịkwụsị.
A na-ekewa nkewa n'etiti diski nwere ọdịdị cone. Ngwakọta na -abanye n'ime nnukwu efere site na ọkpọkọ nri, wee rute n'otu diski mgbe ọ gafesịrị oghere nkesa. N'okpuru ike centrifugal siri ike, oge ọkụ (mmanụ azụ) na -asọba n'etiti etiti n'akụkụ diski dị n'elu, na -agbago elu na ọwa etiti, wee si na mpụta mmanụ azụ site na mgbapụta centripetal. Ọ bụ ezie na oge dị arọ (mmiri protein) na -agagharị na mpụga n'akụkụ diski dị n'ime, yana elu na ọwa dị n'elu, ma wepụta ya na mpụta mmiri protein site na mgbapụta centripetal. A na -eji mmiri protein nweta obere ihe siri ike (sludge), a na -atụba ọtụtụ n'ime mgbidi dị n'ime nnukwu efere, gbakọtara na mpaghara sedimenti, mgbe oge ụfọdụ gachara, na -agbapụta ya mgbe niile site na oghere sludging site na piston ala.
Centrifuge na-anabata mgbapụta onwe onye na-amị amị na centripetal. Ya mere igwe nwere ike na -arụ ọrụ ogologo oge ogologo oge, na -enweta nsonaazụ nkewa dị mma n'ikpeazụ.
Ụzọ ndị a na-amị amị bụ akpọnwụ akpaaka, akụkụ ụfọdụ na-ata ma na-ata ata nke ọma. N'ozuzu, a na -eme mkpọtụ n'ụzọ zuru oke mgbe nkewa ahụ fọrọ nke nta ka ọ gwụchaa; A na-emecha ntụpọ ụfọdụ mgbe sludging akpaaka enweghị ike ikewa nke ọma, na-abụkarị etiti kwesịrị karịa nkeji 2 na nke ugbu a bụ ọnụego nkịtị, mgbe ọ nwụchara, ga-edozigharị oge sludging akpaaka.
Nke gara aga: Tricanter (igwe dị mma azụ azụ azụ nri mmịpụta Tricanter igwe)
Osote: Mmiri Protein Water (Good Quality Azụ Nri na mmanụ nhazi Protein Water okpomọkụ Machine Na Equipment)
Centrifuge N'ihi Azụ Oil separator
Onye nkesa Centrifuge na Tricanter
Drum Azụ Oil Centrifuge separator Machine
Azụ Oil Centrifuge separator Machine
Fish Oil mmịpụta Centrifuge Machine
Fishmeal Production Line Obere Mmanụ tank
Igwe mmiri na -ahụ maka azụ azụ
Mmiri mmiri ọkụ na -emepụta azụ azụ
Tank na-ekpo ọkụ tank
Protein Water okpomọkụ (Good Quality Azụ Nri An ...
Tricanter (High Quality Azụ Oil Azụ Nri Ext ...